World War Z ရဲ့ အခက်ဆုံး Extreme Difficulty နိုင်အောင် ဘယ်လိုဆော့မလဲ
World War Z ရဲ့ အခက်ဆုံး အရိုးခေါင်း ၆ လုံး Difficulty နိုင်အောင် ဘယ်လိုကစားမလဲ
စာဖတ်သူတော့ မသိဘူး၊ ကျနော်ကတော့ သဘောကျမိတဲ့ ဘယ်ဂိမ်းမဆို 100% ပြည့်အောင် ကစားဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး ဆွဲမိသွားတဲ့ဂိမ်းလေးက 2004 တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ Resident Evil4ပေါ့ (၇ တန်းအရွယ် ဦးနှောက်နဲ့ ကစားဖြစ်တဲ့ ဂိမ်းဟာ ကျနော်ကပဲ ပါရမီထုံသူဖြစ်နေလို့လား မသိပေမယ့် Normal နဲ့ အောင်ခဲ့ဖူးတယ်)
ကြွားလုံးထုတ်တယ်မဆိုရပေမယ့် ကျနော်ပြောချင်တဲ့ သဘောက ကိုယ်တကယ်ဝါသနာပါ (ကျွမ်းကျင်) တယ်ဆိုရင် ခက်ခဲတဲ့ အရာမရှိပါဘူး။ ဒါကို စကားအဖြစ်ပြောတာပါ၊ တခြားဂိမ်းတွေကိုလည်း အနှစ်ကျအောင် ဆော့ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးမှာ World War Z အကြောင်းကိုပဲ ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
How hard is World War Z Extreme?
ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာက ဘာဖြစ်လို့ Extreme Difficulty နိုင်အောင် ဆော့ဖို့ ပြောရပါသလဲ? ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းရဲ့ အခက်ဆုံး Level အောင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ World War Z မှမဟုတ် တခြားသောဂိမ်းတွေမှာလည်း ခရေဇီ (Hardcore) သမားတွေအတွက် သီးသန့် Difficulty ထည့်ပေးထားသလို အောင်သွားရင်လည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကို ပြန်ပေးပါတယ်။
ဘာတွေလဲ စာဖတ်သူ (ဂိမ်မာ) တွေ သရေယိုအောင် ပြောရရင် Resident Evil4ကို Professional နဲ့အောင်သွားရင် Plasma Gun (P.L.R 412) ပေးပါတယ်။ ဒီကောင်က ဘယ်လောက်ထိ Powerful ဖြစ်လဲဆိုရင် လာသမျှ Zombie ပုစိကွေးတွေကအစ Boss တွေအားလုံးကို Plasma Beam တစ်ချက်လွတ်ရုံနဲ့ ဇဝိန်ခြွေနိုင်တယ်။
ဒီလိုပဲ Horror ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းဖြစ်တဲ့ The Evil Within (2014) ရဲ့ Akumu (တစ်ချက်ထိတာနဲ့ တန်းသေတဲ့ Difficulty) အောင်သွားရင် Brass Knuckle ပေးပါတယ်။ အခု World War ဇီ မှာ အရိုးခေါင်း ၅ ခု (PC & XBox) (PS4 မှာ ၆ခု) Extreme နဲ့ အောင်သွားခဲ့ရင် ဘာရသလဲ?
6 Skulls Update
စာဖတ်သူတွေ သိရအောင် ပြောရရင် Word War Z ကို မိတ်ဆက်ခါစ အမြင့်ဆုံး Difficulty ဟာ Insane ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၂၀၁၉ မှာ6Skull Extreme ကို ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြောရရင်6Skull ဟာ မတရားခက်ပြီး အောင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး (Humanity is not meant to Survive) ဆိုထားသလိုပဲ တကယ် Unforgiving ပါ။
2019 ဒီဇင်ဘာမှာ Developer ကြီး Saber က Major Update ထုတ်ပေးလိုက်သလို Version 1.5 မှာ Extreme က အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာတယ်။ New York နဲ့ Moscow Episode မှာ Chapter နှစ်ခုထပ်တိုးလာပြီး Horde Mode ထည့်ပေးလာတယ်။
Extreme က မတရားခက်လို့ ဂိမ်မာတွေ ညည်းကြတယ် ထင်ပါတယ်၊ တချို့ Cheat ပြီး ကစားသူတွေ ရှိသလို ပိုက်ဆံက9တွေချည်းဖြစ်နေတာ Level ကလည်း 999 ခိုးထားသူတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်က Class Level တစ်ခုတင်နိုင်မှ Player Level တစ်ခုတက်တာပါ။
အကယ်၍ Class ၆ ခုလုံး Level 30 တင်ထားမယ်ဆိုရင်တောင် Player Level က 180 ၊ Prestige Rank4အထိ Max Out လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တောင် 720 လောက်ပဲ အများဆုံးရှိမှာပါ။ Version 1.5 Update မှာ Prestige Rank တင်စရာမလိုအောင် Difficulty လျှော့ပေးထားသလို သက်ဆိုရာ Class တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Level 30 ရှိထားရင် လုံလောက်ပါပြီ (တခြားလိုအပ်ချက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်)
ဒါပေမယ့်လည်း ခိုးကြပါတယ်။ Epic Games ကိုယ်တိုင်ကလည်း (VAC) လွတ်ပေးထားဟန်ရှိသလို World War Z မှာ Anti-Cheat Engine ထည့်မထား (ပါဝင်တယ်လို့ မကြေညာထားပေမယ့်) Extreme Mode မှာ Cheat Disabled လုပ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျနော် ကြုံဖူးတာ ပြောပြပါမယ်။
World War Z & Cheat Issue
New York Episode ရဲ့ Hell and High Water အခန်းကို Extreme နဲ့ ကစားတုန်းက Bunko နဲ့ Tashum ကိုင်တဲ့ နှစ်ယောက်ဟာ Cheat Engine သုံးပြီး Class Experience Point ခိုးထားပါတယ်။ Player Level ကလည်း 200 အထက် ဖြစ်ပြီး ဆော့တဲ့အခါမှာလည်း အတွေ့ကြုံရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Friendly Fire လုပ်နေတဲ့အတွက် မသေသင့်ဘဲ သေနေသလို Defence လုပ်ရတဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ စိတ်ပျက်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ အောင်ခါနီးဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ကောက်ထွက်ပလိုက်တော့ ပုံမှန်ဆိုရင် ဘာ Experience Point မှ မပေးပါဘူး။
Defeat ဖြစ်သွားရင်တောင် Percentage နည်းနည်းပြန်ရပေမယ့် ကစားနေရင်း ထွက်ပစ်လိုက်ရင် သုညပါ။ အဲ့မှာ ဘာပေါ်လာလဲဆိုရင် Level 30 ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့် Medic Class က ဘာမှတင်စရာမရှိပေမယ့် Screen မှာ 99999999/0 ဆိုပြီး လာပြပါတယ် (အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း အံ့အားသင့်သွားတယ်)
Image: Controller Cartel
Class Level 30 ပြည့်ဖို့ Experience Point 47,250 လိုပါတယ်။ ဒီပမဏ မြန်မြန်ပြည့်ဖို့ Insane သို့မဟုတ် Extreme နဲ့ ကစားဖို့လိုသလို Unlock ဖြစ်သွားတဲ့ Upgrade ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံလဲလိုပါတယ်။ အဲ့မှာ 9999999 ဆိုတာကြီးက ဘယ် Level ထိ ခိုးဖို့ စိတ်ကူးထားလဲ ကျနော်လည်း မသိချင်ပါဘူး။
တကယ်ပဲ Extreme နဲ့ အောင်ဖို့ Cheat နေကြသလားပေါ့ (ခုနေ YouTube မှာ ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ Infinite Money ၊ Credits နဲ့ ဂိမ်းထဲမှာ ကျည်မကုန် No Reload ဆိုပြီး ခိုးပုံခိုးနည်းတက်လာမှာပါ)
တကယ်တမ်း5Skulls Challenge မှာ လိုအပ်တာ Skill နဲ့ Experience ပါ။ Version 1.5 ထွက်လာတဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ Update မှာ AI Manager ထည့်ပေးလိုက်ပြီး Extreme Difficulty ကို Adjust လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာထူးသွားသလဲဆိုရင် Special Infected ၆ ကောင်ကနေ ၅ ကောင် လျှော့ပေးလိုက်ပြီး ကျန်တဲ့ Mode မှာ ၄ ကောင်ဆီ ဖြစ်သွားမယ်၊ ဒါပေမယ့် ထွက်တဲ့အချိန် Cooldown ကိုတော့ မတိုးထားဘဲ လျှော့ထားလိုက်သလို သေနတ်ဖောက်သံ၊ ပေါက်ကွဲသံ ကြားတိုင်း အရေတွက် တိုးလာမှာပါ။
ဒီတော့ Silenced Weapon တွေပဲသုံးသင့်သလို တကယ်လို့ တံခါးခွဲပြီး ပစ္စည်းယူမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က အနေထားနဲ့ Defence လုပ်ရမယ့်နေရာနဲ့ နီးနေသလား ဝေးနေသလား ပြန်စဥ်းစားပါ။ အကယ်လို့ ဝေးနေရင် တခြား Player တွေ Zombie Wave ကို ထိန်းနိုင်မလား မှန်းဆပြီးမှ ဖောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။
Version 1.5 မှာ ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်လို့ရတဲ့ လက်နက်အပြင် Extreme နဲ့ကစားမှရမယ့် Unique Sniper Rifle နဲ့ Wakizashi Melee Weapon ကို ကြေညာသွားပါတယ်။ Wakizashi ကို နှစ်သက်ရာ Episode တစ်ခုရဲ့ Chapter တစ်ခန်းကို အရိုးခေါင်း ၅ ခု ကစားရုံနဲ့ Unlock ဖြစ်မှာပါ။
Wakizashi (ဓား) ရဲ့ Special Ability မပါဝင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Achievement ကြွားလို့ရတယ် (တစ်ခါက Level 30 ၊ 40 Player နှစ်ယောက် New York Episode ရဲ့ ဒုတိယ Chapter: Tunnel Vision ကို Extreme နဲ့ဆော့နေတာ ဝင်ကူပြီး အောင်သွားအောင် ကစားပေးလိုက်တော့ ကျေးဇူးတင်ခံရပါတယ်၊ တတိယ Chapter မှာ Wakizashi နဲ့ တဝီဝီခုတ်ဆော့နေတော့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်)
Unique Sniper ရသွားရင်တော့ ပျော်မဆုံးဖြစ်မှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလက်နက်က Extreme Difficulty ကိုတောင် Unmatched ဖြစ်စေသလို Special Infected ကို တစ်ခါသတ်တိုင်း Damage တိုးလာတဲ့အပြင် Weapon Penetration အားကောင်းတဲ့အတွက် Zombie Pyramid ကို Heavy Weapon တွေအတိုင်း ဖြိုချပစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် MK110 ဟာ Long Range ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇွန်ဘီတွေ အနားကပ်လာရင် Effective မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အဖွဲ့ဝင်တွေ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ Cover လုပ်ပေးနိုင်မှ အသုံးပြုသင့်တဲ့ Situational Weapon (T2) လက်နက်လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်
Chapter တိုင်းကို Extreme နဲ့ အောင်မှ ရတာဆိုတော့လည်း World War ဇီ ကစားနေသူ ဘယ်သူမဆို လိုချင်ကြသလို အဲ့လို Player ပါလာရင် အားတက်ကြတယ်၊ Chapter တိုင်းကို Extreme နဲ့ အောင်မှ ရတာဆိုတာ ရှိန်ကြတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း Extreme အောင်ဖို့ ကြိုးစားတုန်းက အဲ့လို Player တွေနဲ့ ကြုံခံရပေမယ့် ဆေးထိုးခံရတာ များပါတယ်။
ဘယ်လို ဆေးထိုးလဲဆိုရင် Chapter တစ်ခုအောင်ခါနီး Achievement မရအောင်လို့ အသေပစ်သတ် ဒါမှမဟုတ် လောင်ချာနဲ့ တဖွဲ့လုံးမောက်အောင် လုပ်ပစ်တဲ့အထိ စိတ်ပုပ်ကြတယ်။ အခက်ဆုံး Chapter ဖြစ်တဲ့ Moscow Sequence က Resurrection ၊ Tokyo Episode က Cruise Control ၊ Jerusalem အခန်းက Dead Sea Stroll Chapter တွေက မတရားခက်ကိုခက်တယ်။
အဲ့ Chapter ကစားရင် Player ၄ ယောက်လုံး ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုသလို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ လိုက်ကုတ်နေတဲ့ ဇွန်ဘီတွေကြောင့် အငြိမ်မနေရပါဘူး (ပစ္စည်းသွားယူ ၊ ခလုတ်ဖွင့်တဲ့ နေရာတွေ အဝေးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်ယောက် မှောက်သွားရင် ကယ်ဖို့ မလွယ်တဲ့အတွက် နှစ်ယောက်တတွဲ ဆော့ရတဲ့ အနေထားပါ)
အဲ့လို ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အချိန် Achievement မရအောင် လုပ်တတ်သူ (အထူးသဖြင့် Level 999 ဖြစ်နေသူတွေ) ပါလာနိုင်တဲ့အတွက် အကြုံပြုလိုတာ သတိတော့ထားပါ။ ကျနော်ကတော့ အရိုးခေါင်း ၅ ခုနဲ့ အောင်သွားပြီးနောက်ပိုင်း Medic သို့မဟုတ် Fixer Class နဲ့ တခြား Player တွေကို Extreme Challenge အောင်ဖို့ လိုက်ကစားပေးပါတယ်။
5 Skulls နိုင်ဖို့ ဘာလိုအပ်လဲ?
ကျနော့်အနေနဲ့ အကြုံပြုလိုတာ Self-defence (ကိုယ့်ဘာသာ ကာကွယ်နိုင်တဲ့) Skill အရေးကြီးဆုံး လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အဖွဲမှာ ဆေးတပ်သား Medic နဲ့ Fixer တို့ ပါသည့်တိုင်အောင် လိုက်ရိုက်၊ လိုက်ကိုက်နေတဲ့ Zombie တွေ၊ Special Infected တွေ ချတာ မခံရအောင် ပြေးလွှာ၊ ရှောင်တိမ်းတတ်ဖို့ (Safe Distance ချတတ်ဖို့) ပဓာနအကျဆုံး ဖြစ်တာမလို့ပါ။
Expertise in All Chapters
အရိုးခေါင်း အပြည့်နဲ့ဆော့တဲ့အခါ သတိပြုမိမယ့်အချက်က ဘယ်နေရာသွားပါ (Reach) ဘာကိုလုပ်ပါ (Interact) နဲ့ Team Highlight (Zeke တွေ Raid တဲ့အခါ ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်စေဖို့ Player တွေကို အပြာရောင် Highlight နဲ့ ဖော်ပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး)
ဒီတော့ Episode တိုင်းအတွက် ဘာလုပ်ရမယ် အလွတ်ကျက်ထားဖို့ လိုသလို Friendly Fire မဖြစ်အောင် ပစ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် (အကယ်လို့ ဇွန်ဘီ Raid မှာ Player ကြားညပ်သွားရင် Melee Attack ကိုသာ အသုံးပြုပါ) Fixer နဲ့ဆော့နေရင် Masking Grenade သုံးပြီး ခပ်ဝေးဝေး Distance ကနေ Cover လုပ်ပေးပါ။
Extreme မှာ Zombie Wave က Insane ၊ Hard တို့ထက် ၂ ဆ ပိုများပါတယ်။ Wave တစ် Wave လာတိုင်း Special Infected ၅ ကောင်ပါလာမှာပါ။ Randomized ဖြစ်တဲ့အတွက် မြင်ရတတ်တဲ့အတွဲက Bull နှစ်ကောင်၊ Infector တစ်ကောင်၊ Gasbags နှစ်ကောင် ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ခါတရံ Bomber တစ်ကောင်၊ Lurker/hider တစ်ကောင်၊ Bull နှစ်ကောင်နဲ့ Infector တစ်ကောင် စသဖြင့် ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အတွေ့ကြုံ မရှိသေးရင် လုပ်နိုင်တဲ့ Tips က Infector နဲ့ Bomber ကို သတိထားပါ။ အရိုးခေါင်း ၅ လုံးမှာ Special Zeke တွေရဲ့ HP (Hit Point) Double ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် သတ်ရခက်ပါတယ်။ Bull လိုကောင်မျိုး မျက်နှာချင်းဆိုင် ပစ်ဖို့ မတွေးပါနဲ့ (အကယ်လို့ ကိုယ့်ဖက်မှာ Slasher သို့ Medic ပါရင် တမျိုးပေါ့)
Bomber နဲ့ Gasbags တွေဟာ သာမန် Zeke တွေထက် ပိုအပြေးမြန်သလို အကယ်လို့ ကိုယ့် Squad ထဲ အဲ့နှစ်ကောင် အတင်းတိုးဝင်လာလို့က ကွိပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါ။ Bomber ရဲ့ Explosion Damage ဟာ သွေးအပြည့်ကို ချက်ချင်း မှောက်သွားစေနိုင်သလို Gasbags လည်း သေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆိပ်ငွေ့တအူအူ ကယ်မရ၊ ပြုမရ ဖြစ်စေမှာပါ။
ဒီချိန်မှာ Fixer သို့မဟုတ် Medic Role က အရေးပါသလို အခြေနေ ဗြောင်းဆန်မသွားစေဖို့ Special Zeke တွေရဲ့ အသံကို နားစွင့်ပါ။ ဥပမာ Bomber ဆိုရင် စက်သံ၊ Gasbags ဆိုရင် အသက်ရှုသံ ၊ Lurker ဆို လည်ချောင်းသံ ရှည်ရှည်ကြီးထွက်နေတတ်သလို Bull က ကျွဲသံပေးတတ်ပြီး Infector က အကျိချွဲ ပျို့အင့်သံ ထွက်တတ်ပါတယ်။
တတိယ သတိထားသင့်တာ Defence သို့မှဟုတ် Protect/Cover လုပ်ရတဲ့အခါ လူအုပ်သံ ညာသံပေးပြီး မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားတဲ့ ဇွန်ဘီတွေ နှိမ်နင်းရတဲ့အခါပါ။ Chapter တိုင်းမှာ ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံး လုပ်သင့်တာ Primary Weapon ကို Penetration အားကောင်းတာ သို့မဟုတ် Burst Damage/ Explosion Damage ပေးနိုင်တဲ့ SMG ၊ Rifle နဲ့ Shotgun ၃ မျိုးထဲက နှစ်သက်ရာ ဆောင်ထားမိပါစေ။
ဒုတိယ အနေနဲ့ကတော့ Crowd Control ကောင်းမွန်တဲ့ Heavy Weapon တစ်လက် ဆောင်ထားဖို့လိုသလို ကိုယ့် Squad မှာ Hellraiser သို့မှဟုတ် Exterminator တစ်ယောက်ပါရင် ပိုမိုက်ပါတယ်။ တချို့ Defence Mission တွေက စက္ကန့် ၃၀ လောက်ပဲ အချိန်ပေးတဲ့အတွက် ဇွန်ဘီပိရမစ်ကို ခဏအတွင်း ဖြိုပစ်ဖို့ ပေါက်ကွဲစွမ်းအား လိုအပ်ပါတယ်။
ကစားဖော်ချင်း ဆက်သွယ်ပါလို့ ပြောရတာက VC ကနေ စကားပြောတာထက် ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိတယ် (ဥပမာ သွေးအိတ်၊ Supply Bag နဲ့ Weapon Location ၊ Virus Sample) တွေကို Marker “T” နှိပ်ပြီး ပြနိုင်ပါတယ်။
အဓိကတော့ Team Positioning အရေးကြီးဆုံးလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပြီး Extreme မှာ Voice Chat မသုံးလည်း Problem မရှိပါဘူး။ Defence လုပ်တဲ့အခါဖြစ်စေ Wave နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဖြစ်စေ လွတ်ရာကြွတ်ရာကနေ ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တချို့ ဘုမသိ၊ ဘမသိ ကစားသမားတွေ Wave လိုက်ချီတက်လာနေတဲ့ ဇွန်ဘီတွေအကြား ခုတ်ထစ်ရင် မှောက်သွားတတ်သလို နေရာအရွေးမှားလို့ ချောင်ပိတ်ရိုက်ခံရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ခါကျရင် ဆောရီးပဲ (တွဲမဆော့ရုံပဲ ရှိပါတယ်)
ဒါကြောင့် အရိုးခေါင်း ၅ လုံးအပြည့် ကစားတဲ့အခါ Level နိမ့်တဲ့ ကစားသမား သို့မှဟုတ် သက်ဆိုရင် Class Level 30 အပြည့်မရှိသူများနဲ့ လုံးဝလုံးဝ တွဲမကစားပါနဲ့၊ နောက်တချက်က Extreme မှာ Friendly Fire Damage ကို မသက်ညာထားတဲ့အတွက် ယောယောင်ပြီး ဇွန်ဘီနဲ့ ကစားသမား လက်ချောပစ်နေရင် တွဲမဆော့ပါနဲ့။
Ammo Fill သေတ္တာက Easy နဲ့ Normal မှာ Unlimited Refill ရပေမယ့် Hard နဲ့ Insane မှာ 12 ခါ၊ Extreme မှာ6ခါပဲ ပြန်ဖြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ Defence Mission တွေမှာ Side-Quest အဖြစ်ပါလာတတ်တဲ့ ပါဝါဖွင့်ပါတို့ ပြောတဲ့အခါ ဇွန်ဘီတွေကို ရှင်းရင် ကြန့်ကြာမှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကျည်ဖြည့်လိုက်၊ သွားပြန်ပစ်လိုက် လုပ်နေရင် မိနစ်ပိုင်းပဲ ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Side-Quest အရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ Ammo Fill က ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် Fixer ပါနေရင် ပူစရာ မလိုပါဘူး။
ဒုတိယအချက်က သွေးအိတ်နဲ့ Supply Bag မတရားရှားတဲ့ အချက်ပါ။ ကစားသူ ၄ ယောက်အတွက် ၂ အိတ်စီပဲ ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Support Player (Medic နဲ့ Fixer) တွေကို ဦးစားပေးပါ (ကိုယ်မှောက်သွားရင် ကယ်မယ့်သူက သူတို့ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် မလုပါနဲ့)
ဒီလို Resource နည်းတာ Extreme Mode ရဲ့ Challenge ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ Class မှာ Auto Refill လုပ်နိုင်တဲ့ Upgrade တွေပါဝင်ပြီးသားပါ။ ဥပမာ Special Infected ကို သတ်ရင် 1 Supply Bag Refill လုပ်မယ် Medic ဆိုရင် သွေးအိတ်ရမယ် စသဖြင့် Surviving Talents တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အရိုးခေါင်း ၅ လုံးမှာ Special Zeke တွေ များတဲ့အတွက် ကျနော်ကတော့ Special Kill Talent ယူသလို ဇွန်ဘီ ၁၅ ကောင်ဆက်တိုက် သတ်နိုင်ရင် သွေးအိတ် Refill ၊ လက်ပစ်ဗုန်း Refill စသဖြင့် ယူပြီး ကစားပါတယ်။
World War Z Class Benefits
World War ဇီမှာ ဘယ် Class အကောင်းဆုံးလဲ? အများစုက Medic နဲ့ Fixer ကို High-ranked လို့ ပြောကြပေမယ့် Class အားလုံးမှာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ အားသာချက် ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ Player တွေ အသက်ရှင်နေဖို့ Medic မပါမဖြစ် လိုသလို Crowd Control အတွက် Gunslinger ၊ Hellraiser တို့နဲ့ Close Range အတွက် အမိုက်ဆုံး Slasher Class က သူ့နေရာနဲ့သူ အရေးပါကြပါတယ်။
Extreme Mode မှာ 1 Medic ၊ 1 Fixer ၊ 1 Slasher နဲ့ ကျန်တဲ့ Class တစ်ခုခုပါရင် Strong ဖြစ်ပါတယ်။ Jerusalem Chapter အများစုက Zeke တွေ မတရားများလွန်းတဲ့အတွက် Fixer ၂ ကောင် (Masking Gas + Ammo Bag) ပါရင် ပို Feel ပါတယ်။
Tokyo အခန်းမှာတော့ 1x Medic ၊ 1x Fixer နဲ့ Hellraiser ၊ Exterminator ၊ Gunslinger ၃ မျိုးထဲက နှစ်မျိုးပါရင် အောင်လွယ်ပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကတော့ နှစ်သက်ရာ Class အလိုက် Max Level တင်ပြီး ကစားနိုင်သလို အကယ်လို့ Prestige Rank2ထိ ရောက်ထားရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒီလို အရေးကြီးတာတွေ သိပြီးသွားရင် Weapon Customization အတွက် XP နဲ့ ပိုက်ဆံရှာဖို့ လိုပါတယ်။ တွေ့ရာသေနတ်ပစ်ပြီး ကစားနိုင်တယ်ဆိုမယ့် Level 1 လက်နက်တွေ ပျော့တယ်။ ကျနော် Fav ဖြစ်တာ SMGs ၊ Sporting Carbine ၊ Shotguns နဲ့ Sniper တွေပါ။
များသောအားဖြင့် ဒီလက်နက်တွေနဲ့ပဲ ကစားဖြစ်သလို စာဖတ်သူတွေ နှစ်သက်ရာ လက်နက်တွေနဲ့ ကစားနိုင်တယ်။ အရင်တခါ ဖော်ပြဖူးတဲ့ Starter Guide မှာလို Weapons တွေကို Level5ထိ တင်ရင် ပိုပြီးတော့ Powerful ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ ခုမှကစားမယ်ဆိုရင် XP နဲ့ ပိုက်ဆံ မြန်မြန်ရှာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကိုလည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Moscow Episode ရဲ့ ပထမဆုံးခန်းကို Fast Weapon XP Farm လို့ ပြောကြသလို Extreme မှမဟုတ် နှစ်သက်ရာ Difficulty နဲ့ ကစားနိုင်ပါတယ်။ လိုရင်းကတော့ အဆောက်ဦးထဲ ဝင်သွားပြီး ပထမဆုံး Security Code ဖွင့်ရတဲ့အချိန် တက်လာသမျှ ဇွန်ဘီတွေကို Random ပေးထားတဲ့ လက်နက်တွေထဲက နှစ်သက်ရာနဲ့ XP အမြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ပိုက်ဆံရှာချင်တယ်ဆိုရင် Extreme Solo ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး Security Code ဖွင့်ရတဲ့ အခန်းထိ ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် Bot တွေကို ပစ်သတ်ပစ်ပြီး ကိုယ်လည်း အသေခံလိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ရင် ၂ မိနစ်ထဲနဲ့ ပိုက်ဆံ 250 ရှာနိုင်ပါတယ်။
Try and Try & Try
အရိုးခေါင်း ၅ လုံးမှာ အရေးကြီးဆုံး Tips တွေ ပြောပြီးသွားပြီ။ Unlock လုပ်ဖို့ ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ Experience ရှိဖု့ပဲ ကျန်ပါမယ်။ အဲ့တော့ ကစားပါ (ရှုံးသွားလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ Try ကြည့်ပါ) Extreme နဲ့ ဆော့လို့ ပို Feel တာ သိလာနိုင်သလို ကျွမ်းသွားတဲ့အခါ တော်ရုံဇွန်ဘီအုပ်နဲ့တွေ့ရင် ထိန်းလာနိုင်မယ်။
ကိုယ့်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်း Communicate ကောင်းကောင်းလုပ်လာနိုင်မယ်။ တကယ်လို့ Partner ကောင်းကောင်းနဲ့ မကစားနေရရင် အခုရေးသားထားသူနဲ့ တွဲဆော့နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောရင်း ရပ်လိုက်ပါမယ်။
World War Z Epic Game Store
အခမဲ့ဆော့ကစားနိုင်မယ့် Mobile Game အမျိုး ၂၀